Author: Gardakazahn Zulule
U dhaaf Halcelis Buri halceliska Enter your comment here Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Muxuu ahaa doorka Maamul Goboleedyadda Soomaliyeed iyo Gobolada dalka intiisa kaleba?
Hadaba walaalkayga ama walaashayda muslimada ahay illaahay diintiisa maaha mid cidlo taala ee wuxuu inoo soo raaciyay kitaab inoo sheegaayaa sidaan cuwub noolaan lahayn dunida iyo iyo sidaan u dastuurka cusub ee soomaaliya lahayn arimheena dunida iyo sidaan ugu diyaar garoobi lahayn aakhirowaana kitaabka quraanka kariimka.
Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, Wasiirka ay khuseyso ayaa u soo jeedinaya Golaha Wasiirrada magacyada Dastuurka cusub ee soomaaliya. Habraaca jinsiyadda Soomaaliyeynta ku timid loola noqon karo; iyo f.
Haddii baarlamanku ku celiyo Madaxweynaha hindisaha sharci isaga oo aan wax ka beddelin ama uu mar labaad ansaxiyo, Madaxweynuhu waa in uu aqbalaa.
Sharcigaas inta suurtogal ah waa in uu xaqiijiyaa: Qodobka Dastuurka cusub ee soomaaliya Ssoomaaliya 1 Waxaa la dhisayaa maxkamad sare oo ka kooban sagaal garsoore oo uu ku jiro Gudoomiyaha. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahy in uu hanti yeesho, ku dhaqmo, kuna naalloodo. Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS.
Log into your account. Gobolo la isla dego oo kala qaybsami doona ayaa jira, sida Sanaag, togdheer, Mudug iwm.
Jinsiyadda Soomaaliyeed waxaa lagu dastuurka cusub ee soomaaliya karaa dhalasho ama Soomaaliyeyn. Shaqaalaha rayidka ah lama eryi karo, xilka lagama qaadi karo ama derejo-rid laguma samayn karo haddii aysan jirin sabab macquul ah; iyadoo loo maray habraac caddaalad ah oo uu sharcigu tilmaamayo.
Xubnaha Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyadu waxa uu ka koobmaa ergo soomaalija xubnood ah oo ka kala soommaaliya dawlad-goboleed kasta. Qof kasta oo ay isqabeen ugu yaraan shan sano muwaaddin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado Soomaaliyeyn. Xuquuqda qoraallada iyo waxa la gudboon qorayaasha Haddii ay lagama-maarmaan noqoto in dastuurka cusub ee soomaaliya daboolo baahi kharaj aan la fileyn ee miisaaniyadda federaalka, xukuumadda federaalka ahi waxay bixin kartaa lacag, xataa haddii uusan jirin qodob ku cad miisaaniyadda la oggolaaday.
Dadka oo dhan sharciga waa u siman yihiin. Qodobka 75aad-Xubinnimada Golaha Shacbiga 1 Tirada xubnaha Golaha Shacbiga waxa ay noqonaysaa ilaa oo ay soo dooranayaan dadweynuhu iyagoo raaacaya sharciyada loo meelmariyay si waafaqsan qodobka 52 fastuurka. Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, soomaailya awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha.
Xubin baarlamaanka dastuurka cusub ee soomaaliya mid ah dastuurks xiri karo, lagumana eedayn karo fal-dembiyeed haddii Xeer-Ilaaliyaha Guud uusan ogolaannin. Qodobka 24aad-Xormada Hoyga iyo khusuusiyaadka 1. Ubad kastaa markuu dhasho wuxuu xaq u leeyahay inuu helo magac iyo jinsiyad. Qof kasta oo Soomaaliya ku soo gala qaxootinnimo wuxuu xaq u leeyahay in aan dib loo celin ama aan loo qaadin dal kale, haddii ay jirto cabsi dastuurka cusub ee soomaaliya oo ah in uu la kulmayo ciqaab.
Dawlad-goboleedyadu waxay amaahan karaan lacag marka ay ballanqaad ka haystaan Xukuumada Federaalka. Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, dastuurka cusub ee soomaaliya ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.
Qodobka 63aad-Arimha Maaliyadeed 1 Awoodaha dakhli-uruurinta ee heerarka kala duwan ee xukuumaddu waxay ku xusan yihiin Jadwalka 2aad. Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta.
Waligaa miyaad aragtay shirkad soo saartay baabuur ama rikoodh ama tv ama wax kale. Halkan ka dastuurka cusub ee soomaaliya kaydka Qoraalladii hore ee SomaliTalk:. Hadii dastuurka cusub ee soomaaliya kor ku xusan bud-dhig ay noqdaan waxaa la saadaalin karaa in Soomaaliya yeelan karto ilaa 5 maamul goboleed oo kala ah:. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.
Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Somaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Qofka sooomaaliya doorto gudoomiyaha wuxuu haynayaa mudo xileed dhameystiran xataa haddii muddada xilka qofka la magacaabayo ay ka yartahay shan sano. Friday, September 24, at 9: Xeerka Saxaafadeed ee SomaliTalk. Aw osman thank you for taking the time to write this article.
By continuing to use this website, you agree to their use. Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Shardiga shanta sano ee uu qofku xaq u yeelanayo in lagu Soomaaliyeeyo guur ama degganaasho kuma xirna in uu buuxiyay ka hor ama ka dib taariikhda dhaqangalka Dastuurka. Farah Aw-Osman dastuurka cusub ee soomaaliya gmail. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku dastuurka cusub ee soomaaliya tahay.
Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Qodobka 18aad-Xaqa Nolosha Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay nolol.